मनोविज्ञान प्रयोग गरी आगन्तुकहरूलाई रूपान्तरण गर्ने १० तरिकाहरू Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 26, 2012 आइतवार, नोभेम्बर 25, 2012 Douglas Karr
व्यापार प्राय: केवल अधिक बिक्री ड्राइभ गर्नका लागि मात्र केन्द्रित हुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो गल्ती हो। होइन किनकि यसले काम गर्दैन तर यसले श्रोताको प्रतिशतलाई मात्र प्रभाव पार्छ। सबैजना छुटमा रुचि राख्दैनन् - धेरैले समयसापेक्ष शिपिंग, उत्पादको गुणस्तर, व्यवसायको प्रतिष्ठा, आदिको बारेमा बढी चिन्तित हुन्छन्। वास्तवमा म शर्त गर्न तयार हुन्छु। विश्वास गर्नुहोस् भन्दा अक्सर उत्तम रूपान्तरण अनुकूलन रणनीति हो छुट.
रूपान्तरणहरू प्रायः मनोवैज्ञानिक हुन्छन्। उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरू केवल ठूलो सम्झौताको लागि खरीद गर्दैनन्, तिनीहरू प्राय: डर, खुशी, आत्म-संतुष्टि, आत्म-छवि, परोपकारिताको कारण खरीद गर्दछन् ... त्यहाँ धेरै संख्याका कारणहरू छन्। त्यसोभए तपाईं ती अवसरहरूमा कसरी ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी सबै फरक छौं, तर धेरै उदाहरणहरूमा हाम्रो दिमागले उस्तै प्रकारले प्रतिक्रिया गर्ने प्रवृत्ति छ, र मानव दिमागमा यी सूक्ष्मताहरू बुझ्दा तपाईंको व्यवसायलाई नैतिक तवरले "हो!" भन्ने ठाउँमा बढि खरीददारहरू सर्नको लागि रचनात्मक तरिकाहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूमा।
हेल्पस्काउटले यो इन्फोग्राफिक जारी गर्यो, अधिक ग्राहकहरुमा परिवर्तन गर्ने १० तरिकाहरू (मनोविज्ञान प्रयोग गरेर), र तपाईं एक ebook डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुन अधिक विवरणमा जान्छ।
टैग: रूपान्तरणरूपान्तरण अनुकूलनडाउनलोडई-बुकfree ebookमद्दतमनोविज्ञान
एक क्लिक ह्वाइटपेपरको महत्व
डिसेम्बर १, २०१32012:२:8 अपराह्न
तपाईको सम्भावनाको आवश्यकता र चाहनालाई बुझ्दै मलाई अधिक ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने दिशामा मुख्य कम्पोनेन्ट लाग्दछ। हो, हामी सबै फरक छौं र एक उद्यमीको रूपमा हामीले यस कारकलाई विचार गर्नुपर्छ। तपाईंको सम्भावनाले तपाईंलाई हो भन्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू बनाउनुहोस्। एक रणनीति मात्र नछोड्नुहोस्।
बाडेको मा धन्यवाद:)